Xil.Dalxa oo ka horyimid Barnaamij ay dowladu damaanad ku weydiineyso shaqaalaha… – Hagaag.com
Xil.Dalxa oo ka horyimid Barnaamij ay dowladu damaanad ku weydiineyso shaqaalaha…
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa waxaa uu ka horyimid barnaamijka ay dowladda damaanadda ku weydiinayso shaqaalaha dowladda u shaqeeya.
Tan iyo markii uu dhacay qaraxii Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir, lana sheegay in ay fulisay gabar agaasime ahayd ururka naafada ee Gobolka Banaadir ayaa waxay taasi dareen ku dhalisay dowladda.
Dowladda Federaalka Somalia ayaa waxay awaamiir ku soo rogtay shaqaalaheeda, iyadoona mid kasta ku amartay in uu keeno Xildhibaanka ku metela Baarlamaanka Somalia, si looga saxiixo in uu damaanad ka yahay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo tallaabadani ka soo horjeestay ayaa sheegay in uu u arko mid lagu xujeynayo Xildhibaanada Baarlamaanka.
“Arrintaas damaanada ah waxaan u aragnaa mid lagu xujeynayo Xildhibaanada, dowladdu markii ay qoraneysay shaqaalaha anagu uma aanan gayn, iyadaa qoratay, dadka qaarna waxaaba laga yaabaa inaysan lahayn Xildhibaan ku metela Baarlamaanka. Marka qofka aanan anigu shaqada gayn, ma garanayo waxaa la ii dhahaayo damiino, waxaan u arkaa culeys siyaasadeed oo Baarlamaanka la saarayo.” Ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Xildhibaan Dalxa oo Warbaahinta la hadlay ayaa yiri “Dowladdu hanaga deyso go’aanka ah in Xildhibaanku damiinto qof uusan garanayn waxa ka imaan kara, haddii aysan doonayn in meeshaas ceeb ka timaado, si kale ayay u maarayn kartaa. Nidaamka ay u martay qorista ciidamada ayay u mari kartaa oo diiwaan-gelin casri ah ayay ku samayn kartaa, yeysan nagu dhibin anaga.”